ကျွန်တော်သည် သခင်ခရစ်တော်၌ ရှိသည်။
ဘုရားသခင် ကမ္ဘာ ပေါ်သို့ကြည့်သော်၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်၊ မိသားစု နှစ်စု ကိုတွေ့ရသည်။ အာဒံ၏မိသားစု နှင့် သခင်ခရစ်တော်၏ မိသားစု တို့ကိုတွေ့ရလေသည်။ အာဒံသည် သူ၏ မိသားစုဝင်များ၏ ဦးစီးခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်သည် သူ၏ မိသားစုဝင်များ၏ ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်တော်သည် အာဒံ၏မိသားစုတွင်ရှိလျှင်၊ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်ကို အာဒံမိသားစုဝင်အနေနှင့်မြင်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်သည် သခင်ခရစ်တော်၏မိသားစုတွင်ရှိလျှင်၊ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်ကို သခင်ခရစ်တော်မိသားစု ၀င်အနေနှင့်မြင်မည်။
ဘုရားသခင် မြင်တာ အာဒံ၏မိသားစုဝင်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ သခင်ခရစ်တော်၏မိသားစုမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်။ သူ ကျွန်တော်ကို မြင်တာ အာဒံမှာ (သို့မဟုတ်) သခင်ခရစ်တော်မှာ မြင်မည်။ ဘုရားသခင်လူတိုင်းကို အာဒံအထဲ၌ (သို့မဟုတ်) သခင်ခရစ်တော် အထဲ၌ ဟုမြင်မည်။
အာဒံအထဲ၌ သည် ဘာအဓိပ္ပါယ် ရှိသနည်း?
အာဒံအထဲ၌ အဓိပ္ပါယ်သည်၊ အာဒံ လုပ်ကိုင်တာအားလုံး နှင့် ခံစားရဒါအာလုံး ပါဝင်မှုရှိမည်။ အာဒံအထဲ၌သည်၊ ဘုရားသခင်နှင့် ကွဲကွာနေရသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ စာတန်၏မှောင်မိုက်သောနိုင်ငံတွင် ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အောက်မှာရှိသည်။ ဘယ်လောက်၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေသို့ရောက်နေသည်။
ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို သခင်ခရစ်တော်၌ ထည့်ထားသည်။
သဘာဝအလျောက် မွေဖွါးကြသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်၊ အာဒံ၏အပြစ်သား မိသားစုဝင်များဖြစ်လာကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် အာဒံအထဲ၌ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့် သခင်ခရစ်တော်က ပြောကြားသည်မှာ၊ “ဒုတိယမွေးခြင်း ကိုခံရမည်။” ကျွန်တော်တို့သည်၊ သခင်ခရစ်တော်၏မိသားစုဝင်ဖြစ်ရန်၊ ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယမွေးခြင်း ကိုခံရ ကြမည်။
ဒီဟာ ၀မ်းမြောက်စရာသတင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် သခင်ခရစ်တော်ကို။ ကျွန်တော်၏ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်ကို အာဒံ၏မိသားစုထဲမှထုတ်ဖယ်ပြီး၊ သခင်ခရစ်တော်၏မိသားစုဝင် ဖြစ်စေ သည်။ ကျွန်တော်သည်ယခု သခင်ခရစ်တော်၌ရှိသည်။ ကျမ်းစာက
“ထိုဘုရားသခင်အားဖြင့်သင်တို့သည် ယေရှုခရစ် ၌ တည်နေကြ၏။ ----“ (၁ကော ၁း၃၀)
ကျွန်တော် သခင်ခရစ်တော်၌ ဘယ်လိုရောက်ရသနည်း။? ဘုရားသခင်ပို့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလုပ် နိုင် ပါ၊ ဘုရားသခင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏တန်ခိုးတော်ဖြင့်၊ အာဒံ၏အပြစ်မိသားစုမှ၊ ထုတ်ယူ၍၊ သခင်ခရစ်တော်၏ မိသားစုဝင်အဖြစ်သို့ ၀င်ရောက်စေသည်။ ကျွန်တော်ကို သခင်ခရစ်တော်၌ ထည့်ပေး ခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးတွင်၊ အလွန်အမင်း အဖိုးတန်သော စကားအသုံးအနှုန်းသည်၊ အနည်းငယ်ဖွဲ့ဆိုသည့်၊ “သခင်ခရစ်တော် ၌” ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် အကြိမ်ကြိမ်ပါဝင်သည့်၊ သခင်ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်၊ ယုံကြည်သူများသည်၊ “သခင်ခရစ်တော်၌” ရှိကြသည်။ ဘုရားသခင်က၊ သူကိုယုံကြည်သူများသည်၊ သခင်ခရစ်တော်၌ ရှိကြသည်ကို သိစေခြင်သည်။
သခင်ခရစ်တော်၌သည်၊ ဘာအဓိပ္ပါယ် ရသနည်း?
သခင်ခရစ်တော်၌သည်။ သခင်ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်သည့်အရာအားလုံး၌ ပါဝင်မှုနှင့် သူ၏ ယနေ့အခြေအနေ အားလုံးပါဝင်သည်။ သခင်ခရစ်တော်၌ အဓိပ္ပါယ် မှာ ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ “နေရာသစ်” ရသည်။ ကျွန်တော်သည် သခင်ခရစ်တော်၌ ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကိုလက်ခံသည်။
သခင်ခရစ်တော်ကို ကျွန်တော်၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသည် ခဏတွင်၊ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်ကို သခင်ခရစ်တော်အထဲသို့ ထည့်ပေးသည်။ ကျွန်တော်ကို အာဒံ နှင့် အတူ မထားတော့ပါ။ ကျွန်တော်သည် သခင်ခရစ် တော်၌ရှိပြီ။ ကျွန်တော်သည် သခင်ခရစ်တော်၌ထာဝရ ရှိပြီ်။ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကို ထာဝရ တွေ့ရမည့်နည်းဖြစ် သည်။ သခင်ခရစ်တော်၌ ဘယ်လောက် နှစ်သက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းမည်နည်း။
ကျွန်တော်၏ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ “နေရာသစ်” အကြောင်းပြောသည့်၊ ကျမ်းပိုဒ်အချို့
“ ထိုဘုရားသခင်အားဖြင့် သင်တို့သည် ယေရှုခရစ် ၌ တည်နေကြ၏----“ ( ၁ကော ၁း၃၀)
“ ---ဘုရား---မေတ္တာ အားဖြင့်သန့်ရှင်းလျက်၊ အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်မည်အကြောင်း၊” (ဧ ၁း၃)
“ ကမ္ဘာ မတည် မရှိမှီ ငါတို့ကို ခရစ်တော် ၌ ရွေးကောက်တော် မူသည်----“ (ဧ ၁း၎)
“ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ ငါတို့သည် ကောင်းသောအကျင့် တို့ကို ကျင့်ရမည်အကြောင်း၊ ယေရှုခရစ် ၌ပြုပြင် ၍ ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏။ ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့ ၌ ငါတို့သည်ကျင်လည် ရမည် အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီ။ “ (ဧ ၂း၁၀)
“ လူမည်သည်ကား၊ ခရစ်တော် ၌ ရှိလျှင်အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တ၀ါဖြစ်၏။ ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြ၏။” (၂ကော ၅း၁၇)
“ ---မှန်သောဘုရားသခင်ကိုသိသောဥာဏ်ကို ငါတို့အားပေးတော်မူသည်ကိုလည်းငါတို့သိကြ၏။ မှန်သောဘုရားသခင် ၌ ၄င်း၊ သားတော်ယေရှုခရစ် ၌ ၄င်း ငါတို့သည်တည်လျက်ရှိကြ၏။----“ (၁ယော ၅း၂၀)
“ထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွှတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏။” (ကော ၁း၁၄)
“ ဘုရားသခင် ကယ်လွှတ်တော်မူသောကြောင့် ယေရှုခရစ် ၌တည် ၍ ၊ ဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်၊ ၀ိညာဉ် ပကတိ အတိုင်း ကျင့်သောသူတို့သည် အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏။” (ရော ၈း၁)
ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူတိုင်းကိုသိစေခြင်တာကတော့ “သူသည်သခင်ခရစ်တော်၌” ဆိုတာကိုသိစေခြင်သည်။ အထက်မှကျမ်းပိုဒ်များကိုပြန်ဖတ်၍ သခင်ခရစ်တော်၌ (သို့မဟုတ်) သူ၌ ခဲတံနှင့်မျဉ်းတားပါ။ ကျမ်းစာအုပ်မှာလဲ မျဉ်းတားပါ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုဖတ်လျှင်။ ဒီစကားများ သုံးထားသည်မှာအကြိမ်များစွာတွေ့ရမည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အကြိမ် ၁၃၀ ကြော်သုံးထားတာတွေ့ရမည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော် သည်သခင်ခရစ်တော်၌ ကိုသိစေခြင်သည်။
ကျွန်တော်သည်သခင်ယေရှုခရစ်၌ ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်က အပြစ်များမှ ခွင့်လွှတ်ပေးသည်။ ကျမ်းစာက “ထိုသားတော်၏ အသွေးအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသော ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏။” (ကော ၁း၁၄)
အပြစ်သားဖြစ်၍ ဘရားသခင်နှင့်သီးခြားနေခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်ရှိနေသောနေရာကို မလာနိုင်ပါ။ ယခုယေရှုခရစ်၌ ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ရှိသောနေရာသို့ ရဲရင့်စွာလာနိုင်သည် ၊ ယေရှုခရစ်၏အသွေးက၊ ကျွန်တော်၏အပြစ်များမှသန့်ရှင်း စေသည်။ ကျမ်းစာက
“သင်တို့သည်အထက်က ဝေးလျက်ရှိသောလည်း၊ ယခုမှာ ယေရှုခရစ် ၌ ဖြစ် ၍ အသွေးတော်အားဖြင့်အနီးသို့ရောက် ကြပြီ။” (ဧ ၂း၁၃)
ကျွန်တော် အပြစ်မှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်။
ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရရန်။ အဖိုးအခပေးရသည်၊ အာဒံ၏ မနာခံမှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို ဘုရားသခင်ထံမှစာတန် က ခိုးယူခြင်းခံရသည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်ကို အပြစ်မှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ကို သူက “ပြန် ၍ခေါ်ခဲ့သည်။” ယခုကျွန်တော်တို့ကို သူပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ် မှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးခဲ့သူ။
“ ခပ်သိမ်းသောသတိ ပညာတော်နှင့် လျော်စွာ ငါတို့ ၌ အတိုင်းထက်အလွန် များလှစွာ သော ကျေးဇူးတော်သည် ကြွယ်ဝ ပြည့်စုံသည်နှင့်အညီ၊ ထိုသားတော်၏ အသွေးအားဖြင့် အဖြစ်လွှတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်း ကျေးဇူး ကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏။” (ဧ ၁း ရ-၈)
ယေရှုခရစ်သည်။ ကျွန်တော် ကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရန် အဖိုးအခ ကြီးမားစွာပေးရသည်။ သူပေးရသည့်။ ပေးရသည်အဖိုး အခသည်ဘာလဲ၊? ပေးရသောအဖိုးအခသည် သူ၏အဖိုးတန်သော အသွေးတော်မြတ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်ရရှိရန်၊ သူအသေခံပေးရသည်။ ကျမ်းစာက
“ မိစဉ်ဘဆက် ကျင်လည်သော အချည်းနှီး ကျင့်ကြံ ပြုမူခြင်းမှ၊ ရွှေငွေ အစရှိသောဖောက်ပြန် ပျက်စီးတတ်သော ဥစ္စာနှင့် သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်။- ဘယ်အပြစ်မှမရှိ၊ အညစ်အကြေးနှင့် ကင်းစင်သောသိုးသငယ်ကဲ့သို့သော ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့” ( ၁ပေ ၁း၁၈-၁၉)
ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်၊ သူငယ်ချင်နှင့် အခြားလူများ က လက်သင့်ခံခြင်းကို လိုအပ်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏လက် သင့်ခံခြင်းသည်၊ အာလုံးထဲတွင် အလွန် အရေးကြီးဆုံးသော လက်သင့်ခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် အာဒံ၏အပြစ်သား မိသားစုဝင်များ အထဲမှာသာရှိမည်ဆိုလျင် ဘုရားသခင် လက်သင့်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ ယေရှုခရစ်ကို ကျွန်တော်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံသည်အချိန်တွင်၊ ဘုရားသခင် လက်သင့်ခံသည်။ ဘာကြောင့် ဘုရားသခင် လက်သင့်ခံသနည်း? ကျွန်တော်သည်၊ ယေရှုခရစ်၌ဖြစ်သောကြောင့်။ ကျမ်းစာက
“ထိုဘုရားသခင်သည်ချစ်တော်မူသောသားတော်ကြောင့်၊ငါတို့အား ပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်၏ ဘုန်းအသရေကို ချီးမွမ်း စေခြင်းငှါ၊ ငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားခြင့် သားအရာကိုရမည်အကြောင်း၊ အလိုတော်ရှိသော စေတနာ အတိုင်းရှေး မဆွက ခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏။” (ဧ ၁း၅-၆)
ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသခင် “ချစ်မြတ်နိုးသော” အချစ်ဆုံးသား ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကို ယေရှုခရစ်က လက်သင့်ခံ သည်။ “ယေရှုခရစ်ကလက်သင့်ခံသည်” ၏အဓိပ္ပါယ်သည် ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကိုချစ်သည်။ လက်သင့်ခံသည်။ သူ၏ “ချစ်မြတ်နိုးသော” သားကို ချစ်သည်အတိုင်းနှင့် လက်သင့်ခံသည့်အတိုင်း၊ ကျွန်တော်ကိုသူ၏ ”ချစ်မြတ်နိုးသော” သား ၌ လက်သင့်ခံသည်။
တစ်ချိန်က လှပသော သူငယ်မလေးတစ်ယောက်သည်။ ဝေးသော နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်။ သူ၏မိသားစုသည် အလွန် ဆင်းရဲသဖြင့် သူမ၏အနာဂတ်သည် မတောက်ပြောင်ပါ။ တစ်ရက်တွင်သူမသည်၊ အခြားနိင်ငံရှိသူဌေး၏အိမ်တွင် အိမ်ဖေါ်လုပ်ရန် သူမ၏အိမ်မှထွက်ခွါခဲ့သည်။
ဤသူသည် အတော်ချမ်းသာသည်။ သူ၏အိမ်သည်၊ သူမအတွက် နန်းတော်ကြီးလိုဘဲ၊ သူက သူမအပေါ်တွင် ကောင်းပါ သည်။ သူမကလဲ သူဌေး ကျေနပ်အောင် အလုပ်ကို ကြိုးစား၍လုပ်သည်။
သူဌေးတွင် သားတစ်ယောက်ရှိသည်။ သူအလွန်ချစ်တယ်။ သူသားက လှပသောအိမ်ဖေါ်မကလေးကို ချစ်သော အချိန် တွင် သူမကလဲ ချစ်တယ်၊ တစ်ရက်တွင် သားက သူမကို ဇနီး ဖြစ်ယူရန်တောင်းဆိုသည်။
သူဖခင်ကလဲ သူသားလက်ထပ်ရန်ချစ်သူရ၍၊ ကျေနပ်သည်။ တနေ့တွင်သားနှင့်အိမ်ဖေါ်မလေးတို့လက်ထပ်ကြသည်။
ချက်ခြင်းဘဲ ဒီကလေးမလေးအတွက်၊ အရာရာတိုင်းပြောင်းလဲသွားသည်။ သူမသည် အိမ်ဖေါ် လုံးဝမဟုတ်တော့ပါ၊ သူမသည် သူဌေးကြီး၏ မိသားစုဝင်အဖြစ် လက်သင့်ခံခြင်းကို ရရှိပြီ။ သူမကိုဘာဖြစ်လို့ လက်သင့်ခံသနည်း? သူမသည် သူဌေးကြီး ချစ်မြတ်နိုးသောသား၏ ဇနီးဖြစ်သောကြောင့်၊ သူမကို “ချစ်မြတ်နိုးသောသား၌ လက်သင့်ခံသည်”
ဒီဟာ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကို လုပ်ကိုင်ပေးတာများ၏ရုပ်ပုံဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် တချိန်က အာဒံ၌ ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်မှာ မျှော်လင့်ချက်နှင့် အနာဂတ်မရှိခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ တရက်တွင် သခင်ယေရှုကို ကျွန်တော်၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံသည်အချိန်တွင် အားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်၊ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကိုယခု အပြည့်အ၀ လက်သင့်ခံသည်။
ဘုရားသခင် ဘာကြောင့် ကျွန်တော်ကို လက်သင့်ခံသနည်း။? ကျွန်တော်သည် ယခု သခင်ယေရှု၌ ရှိသောကြောင့် လက်သင့်ခံသည်။ ကျွန်တော်ကို သခင်ယေရှု၌ လက်သင့်ခံပြီ။ ဘုရားသခင်က “ချစ်မြတ်နိုးသောသား၌” ကျွန်တော်ကို လက်သင့်ခံရန် ပြုလုပ်ပေးသည်။
ကျွန်တော်နေရာသစ်သည် ယေရှုခရစ်၌ ဘုရားသခင်မြင်ရသည်။ ယေရှုခရစ်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် မခံယူမှီက ဘုရား သခင်တွေ့တာ အာဒံအထဲမှာ၊ အဲ့ဒါကျွန်တော်၏နေရာဟောင်းဖြစ်သည်။
ယခုနေရာသစ်ရပြီ၊ ဘုရားသခင်၏အမြင်တွင်၊ ဘုရားသခင် ယခု ကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်၌တွေ့ရသည်။ သူသည် ကျွန်တော်ကိုချစ်သည်။ လက်သင့်ခံသည်။ သူ၏ ချစ်မြတ်နိုးသောသားကိုချစ်သလို၊ လက်သင့်ခံသလို၊ တစ်ပုံစံထဲ ဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်တော်သည် ယေရှုခရစ်၌ ပျောက်ဆုံးနိုင်ပါသလား? ကျွန်တော်သည် ယေရှုခရစ်၌် မပျောက်ဆုံးနိုင်ပါ။ ဒါပေ မဲ့ပျောက် ဆုံးနှိုင်တာရှိသည်။
ကျွန်တော် ယေရှုခရစ်၌ ရှိသော သာယာကြည်နူးမှု၊ ပျောက်ဆုံးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်သည်ဘုရားသခင်၏စကားများကို မနာခံဘဲ၊ ဘုရားသခင်သဘောမကျသည်များကို ဆက်လက်လုပ်နေလျှင်၊ ကျွန်တော်၏ပျော်ရွှင်မှုများ ဆုံးရှုံးမည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်ကို ကြီးမားသောချစ်ခြင်းကြောင့်၊ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကိုလုပ်ပေးသောအရာများသည်၊ ကိုယ်တိုင် လုံးဝမဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ သူက ကျွန်တော်ကို အာဒံ၏မိသားစုမှ ထုတ်ပေးပြီး၊ ယေရှုခရစ်၏မိသားစုဝင်ဖြစ်စေ
သည်။ ကျွန်တော်သည်ယခု ယေရှုခရစ်၌ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကိုချစ်၍လက်သင့်ခံသည်။ ကျွန်တော်ကိုသူ၏ချစ်မြတ်နိုးသောသား၌ လက်သင့်ခံသည်။
အဖဘုရားသခင်၊ ကျွန်တော်ကို ယေရှုခရစ်၌ ထားသည်၊ ကျွန်တော်ကို ချစ်၍ လက်သင့်ခံသည်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကိုထာဝစဉ် ချစ်ရန် နှင့် နာခံရန် ။ ကျွန်တော်၏ဘုရားသခင်ပေးထားသောနေရာသစ်တွင်သာယာ ကြည်နူး မှုရရှိရန် နှင့် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာများ ဖြစ်ရန် အကူအညီပေးတော်မူပါ။
သင်ခန်စာ (၅)မှ မေးခွန်းများ
အမှား အမှန် ရွေးပါ။
က) ကမ္ဘာပေါ်တွင် မိသားစုအများကြီးတွေ့သည်။
ခ) ကမ္ဘာပေါ်တွင်။ မိသားစု နှစ်စု ကိုတွေ့ရသည်။ အာဒံ၏မိသားစု နှင့် သခင်ခရစ်တော်၏မိသားစု တို့ကိုတွေ့ရလေသည်။
၂။ ဘုရားသခင် လူတိုင်းကိုမြင်သည်
က) အာဒံအထဲ၌ (သို့မဟုတ်) သခင်ခရစ်တော်အထဲ၌ ဟုမြင်မည်။
ခ) အကောင်း (သို့မဟုတ်) အဆိုး
၃။ အာဒံအထဲ၌ အဓိပ္ပါယ်သည်၊
ခ) အာဒံ လုပ်ကိုင်တာအာလုံး နှင့် ခံစားရဒါအာလုံး ပါဝင်မှုရှိမည်။
၄။ သဘာဝအလျောက် မွေဖွါးကြသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်၊
ခ) အာဒံ၏အပြစ်သား မိသားစုဝင်များဖြစ်လာကြရသည်။
၅။ ကျွန်တော်သည် သခင်ခရစ်တော်ကို။ ကျွန်တော်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံ၍
က) ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်ကို အာဒံ၏ အပြစ်မိသားစုထဲမှထုတ်ဖယ်ပြီး၊ သခင်ခရစ်တော်၏ မိသားစုဝင် ဖြစ်စေသည်။
ခ) ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်ကို လူကောင်းဖြစ်ရန်ကူညီသည်။
၆။ ကျွန်တော် ဘယ်လို သခင်ခရစ်တော်၌ ဖြစ်လာသနည်း?
ခ) ကျွန်တော် လုပ်ယူသည်။
၇။ သခင်ခရစ်တော်၌၏ အဓိပ္ပါယ်သည်။
က) သခင်ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်သည့်အရာအားလုံး၌ ပါဝင်မှုနှင့် သူ၏ ယနေ့အခြေအနေ အားလုံးပါဝင်သည်။
ခ) ကျွန်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရန်၊ မိမိကိုမိမိ အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။
၈။ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကို လက်သင့်ခံသည်။
က) ကျွန်တော်ဟာ အပြစ်ကင်းစင်သဖြင့်။
ခ) ကျွန်တော်သည် သခင်ခရစ်တော်၌ ဖြစ်သောကြောင့်လက်သင့်ခံသည်။
၉။ ကျွန်တော်၏ နေရာသည်။
က) ဘုရားသခင်တွေ့မြင်နိုင်သည့် သခင်ခရစ်တော်၌ ဖြစ်သည်။
ခ) ကျွန်တော် ယခုနေသော ကမ္ဘာ ၌ရှိသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
၁၀။ ယေရှုခရစ်၏ မိသားစုဝင်ဖြစ်သဖြင့်
က) ယခုနေရာသစ်ရပြီ၊ ဘုရားသခင်၏အမြင်တွင်၊ ဘုရားသခင် ယခု ကျွန်တော်ကို ယေရှုခရစ်၌ တွေ့ရသည်။
ခ) ကျွန်တော်သည်အရင်နေရာနှင့်အတူတူဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ လူကောင်းဖြစ်လာပြီ။